Cele Junior - Celebrities 8DaysaWeek - Journal
Cover Star Album
Cele Teen Life
8Day's Bling Bling
8Day's Bomb Questions
8Day's Celebrity Housestyle
Menu	 HomeFashionBeautyInternational »Entertainment International »Bollywood NewsCele News »InterviewCover Star »Cover Star Album8Days TV »8Days PreviewPrograms »Cele Teen Life »8Day's Bling Bling »8Day's Bomb Questions »8Day's Celebrity Housestyle »Cele JuniorHoroscope
Cele Junior - ကိုကိုဦး သီဟအောင်
အသက်အရွယ်ငယ်ပေမယ် Social Media ပေါ်မှာ ပရိသတ် စိတ်ဝင်စားမှုရရှိထားတဲ့ အနုပညာ ရှင်တွေရဲ့ ရင်သွေးရတနာတွေရှိ သလို အနုပညာရှင်လောကနဲ့ မဆက်စပ်ပေမယ့် လူချစ်လူခင် စိတ်ဝင်စားမှုအများဆုံးရှိတဲ့ ရင်သွေး ရတနာလေးတွေရှိပါတယ်။ အဲဒီ ရင်သွေးလေးတွေနဲ့ သူတို့ရဲ့မိဘများ အပြန်အလှန်မေးဖြေကြတဲ့ Cele Junior ကဏ္ဍကို8days မှ တင်ဆက် လိုက်ပါတယ်။
Written by	ကလောင်-ကျော်မျိုးနိုင်	 11 March 2019
Cele Junior - စူဆီနိုက် ရွှေထက်တန် စိန်ထက်တန်
ရွှေထက်တန် @ Angle
စိန်ထက်တန် @ Erica
အသက်အရွယ်ငယ်ပေမယ့် Social Media ပေါ်မှာ ပရိသတ် စိတ်ဝင်စားမှုရရှိထားတဲ့ အနုပညာ ရှင်တွေရဲ့ ရင်သွေးရတနာတွေရှိ သလို အနုပညာရှင်လောကနဲ့ မဆက်စပ်ပေမယ့် လူချစ်လူခင် စိတ်ဝင်စားမှုအများဆုံးရှိတဲ့ ရင်သွေး ရတနာလေးတွေရှိပါတယ်။ အဲဒီ ရင်သွေးလေးတွေနဲ့ သူတို့ရဲ့မိဘများ အပြန်အလှန်မေးဖြေကြတဲ့ Cele Junior ကဏ္ဍကို 8days မှ တင်ဆက် လိုက်ပါတယ်။
Written by	8Days Journal	 28 February 2019
Designer Joker ဖူးဖူး (ခေါ်) ထက်အိန္ဒြေဦး
အသက်အရွယ်ငယ်ပေမယ့် Social Media ပေါ်မှာ ပရိသတ် စိတ်ဝင်စားမှုရရှိထားတဲ့ အနုပညာ ရှင်တွေရဲ့ ရင်သွေးရတနာတွေရှိ သလို အနုပညာရှင်လောကနဲ့ မဆက်စပ်ပေမယ့် လူချစ်လူခင် စိတ်ဝင်စားမှုအများဆုံးရှိတဲ့ ရင်သွေး ရတနာလေးတွေရှိပါတယ်။ အဲဒီ ရင်သွေးလေးတွေနဲ့ သူတို့ရဲ့မိဘများ အပြန်အလှန်မေးဖြေကြတဲ့ Junior Cele ကဏ္ဍကို 8days မှ တင်ဆက် လိုက်ပါတယ်။
Written by	NTZ	 23 February 2019
Cele Junior - မျိုးစန္ဒီကျော် တို့ သားအမိ
အသက်အရွယ်ငယ်ပေမယ့် Social Media ပေါ်မှာ ပရိသတ် စိတ်ဝင်စားမှုရရှိထားတဲ့ အနုပညာ ရှင်တွေရဲ့ ရင်သွေးရတနာတွေရှိ သလို အနုပညာရှင်လောကနဲ့ မဆက်စပ်ပေမယ့် လူချစ်လူခင် စိတ်ဝင်စားမှုအများဆုံးရှိတဲ့ ရင်သွေး ရတနာလေးတွေရှိပါတယ်။
Written by	8days Journal Administrator	 26 January 2019
မကစ်က စိတ်ထားကောင်း ပြီး မျက်နှာလေးကလည်း ချစ် စရာလေးမို့ သမီးငယ်ငယ်ကတည်း က မကစ်ကို ချစ်တာ
လိပ်ပြာစံအိမ်ရုပ်ရှင်ကားက သမီးအတွက် တတိယမြောက်ကား ပါ။ သမီးက အခုရိုက်ထားတာ ကိုး ကားရှိသွားပါပြီ။ လိပ်ပြာစံအိမ် ရုပ် ရှင်ကားမှာ သမီးက မကစ်နဲ့ ဦးနိုင်း ရဲ့သမီး လုပ်ရပါတယ်။
Written by	8Days Journal	 07 January 2019
Copyright © 2019 Celebrities 8DaysaWeek Journal. All right Reserved.
Developed by: OrientWebs